Taakulaynta Tech Ultimate ee Suuqgeyaasha Waxqabadka Sare | Martech Zone
Sannadkii 2011, ganacsade Marc Andreessen ayaa si caan ah u qoray, software-ka ayaa adduunka cunaya. Siyaabo badan, Andreessen wuu ku saxsanaa. Ka fikir inta qalab software ee aad isticmaasho maalin kasta. Hal taleefan oo casri ah ayaa ku dul haysan kara boqolaal barnaamijyo barnaamijyo ah. Taasina waa hal aalad yar oo jeebkaaga ku jirta.
Hadda, aan u adeegsanno isla fikraddaas ganacsiga adduunka. Shirkad keli ah ayaa adeegsan karta boqollaal, haddii aysan kumanaan ahayn, xalka barnaamijyada. Laga soo bilaabo maaliyad illaa ilaha aadanaha iyo iibka, waax waliba waxay ku tiirsan tahay teknolojiyadda xoogaa awood ah. Waxay noqotay mid lama huraan u ah sameynta ganacsi adduunka maanta.
Suuq geynta kama duwana. Kooxo badan oo suuq-geyn ah oo suuq-geyn ah ayaa ku tiirsan xalal kala duwan oo ah barnaamij-sida-adeegga (SaaS) si loo sii shidayo wada shaqeynta kooxaha iskutallaabta, maareynta mashaariicda socda, iyo la socodka waxqabadka ololaha. Laakiin ka badan 7000 SaaS alaabooyinka kaliya ee suuq-geynta, way adkaan kartaa in lakala saaro waa inuu lahaadaa ka fiican-lahaansho.
Maqaalkan, waxaan uga wada hadli doonaa si sax ah xalka software-ka ee udub dhexaadka u ah tikniyoolajiyadda suuqgeyntaada iyo sababta. Dheeraad ah, waxaan la wadaagi doonaa tusaalooyin qaas ah inta aan socdo.
Waa Maxay Isukeenku?
Erayga raso suuq geynta waxaa loola jeedaa ururinta qalabka softiweerka iyo teknoolojiyada ay u adeegsadaan suuqleydu inay ku qabsadaan shaqooyinkooda. Waxay hoos timaaddaa ereyga dallad weyn isdabajoog ah taas oo ay had iyo jeer adeegsadaan xirfadlayaasha IT-da si loogu daro luqadaha barnaamijyada iyo qaababka loogu talagalay horumarinta arjiga.
Isku-darka suuq-geynta ayaa asal ahaan ah liistada xalka loo baahan yahay ee awood u siinaya kooxdaada inay qabtaan shaqadooda ugu fiican. Qalabkani waa udub dhexaad u ah kobcinta waxtarka, kobcinta iskaashiga, iyo hagaajinta isgaarsiinta.
Sida loo Dhiso Tiknoolajiyadda Suuqgeynta Ugu Dambeysa
Maalmahan, waxaa jira barnaamij loogu talagalay ku dhowaad wax kasta. Sida aan ku arko, waxaa jira laba nooc oo ah qalabka SaaS: waa inuu lahaadaa iyo fiican-lahaansho.
Qalabka ay qasab tahay in la haysto waa kuwa lagama maarmaanka u ah fulinta shaqadaada. Hantida fiican ayaa fiican, way fiicantahay in la haysto. Waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad noqoto qof hal abuur badan ama abaabulan, laakiin wali waa macquul inaad ku garaacdo yoolalkaaga la'aantood.
Waa muhiim inaad haysatid dufcaddaada suuqgeynta. maxaad? Maxaa yeelay software-ka waa qaali. Runtii qaali. Ganacsiyadu kumanaan doolar ayey ku khasaarin karaan rukhsadaha softiweerka ee aan la isticmaalin haddii aysan si taxaddar leh uga fiirsan qalabka ay yihiin daruuriga.
Intaa waxaa sii dheer, haysashada waxyaabo badan oo SaaS ah ayaa noqon kara jahwareer waxayna adkeyneysaa in la abaabulo. Barnaamijka softiweerku wuxuu u maleynayaa inuu noloshaada kuu fududeynayo, ee uusan sii adkaan doonin.
Hoos waxaa ku yaal, waxaad ka heli doontaa liistada qalabyada SaaS ee loo baahan yahay ee loogu talagalay tikniyoolajiyadaada suuqgeynta:
Maamulka Xiriirka Macaamiisha
Maamulka xiriirka macaamiisha (CRM) software waxaa loogu talagalay inay ka caawiso ganacsiyada inay kobciyaan ka qaybqaadashada iyo inay xiriir la yeeshaan macaamiishooda jira iyo kuwa mustaqbalka.
Inta badan aaladaha CRM waxay u shaqeeyaan sidii xog ururin oo kaydiso macluumaadka macaamiisha iyo isdhexgalka. Qalabka dhexdiisa, adeegsadayaashu way arki karaan dhammaan taariikhda xiriirka macaamiisha, iyo sidoo kale macluumaadka la xiriira heshiisyada iibka ee hadda socda.
Barnaamijka CRM waxaa ugu horreyn adeegsada iibka, suuqgeynta, iyo kooxaha fulinta.
Kooxaha iibku waxay ku tiirsan yihiin CRM si ay u abaabulaan macluumaadka la xiriira rajada iyo fursadaha. Hawl fuliyayaashu waxay u isticmaalaan si la mid ah, si ay il gaar ah ugu hayaan dhuumaha dakhliga iyo iibka. Dhinaca suuqgeynta, CRM waxay faa'iido u leedahay raadinta hoggaamiyeyaasha u qalma suuq-geynta iyo fursadaha.
CRM waxay lagama maarmaan u tahay isku soo dhaweynta farqiga u dhexeeya suuqgeynta iyo kooxaha iibka iyo in si wanaagsan loo waafajiyo urur dhan.
Waxaa jira boqolaal qalab CRM kala duwan oo suuqa yaal. Waa kuwan dhowr istaagid:
Salesforce - Salesforce waa shirkad horseed u ah softiweerka CRM ee ku saleysan daruuriga ganacsiyada noocyadooda kala duwan. In kasta oo CRM ay tahay bixinta ugu muhiimsan ee Salesforce, shirkaddu waxay ballaarisay khadadkeeda wax soo saarka si loogu daro adeegga macaamiisha, otomaatiga suuq geynta, iyo xalalka ganacsiga. Iyadoo ku dhow 19% wadarta saamiga suuqa, Salesforce ayaa xukuma booska CRM. Iyo sabab macquul ah - barxadda si joogto ah ayaa loogu qiimeeyaa dadka isticmaala iyo cilmi baarayaasha awoodeeda daruuriga ah ee adag, gaar ahaan markay timaado goobta ganacsiga.
xiriirka Highbridge Caawinta Salesforce
Wax xanaaq yar CRM - Wax xanaaq yar CRM waxaa loogu talagalay si gaar ah ganacsiyada yaryar ee u baahan qalab fudud oo aan lahayn dhammaan dawannada iyo foorida. Waxay ku toosan tahay barta, oo waxaad dhihi kartaa, "dhib yar"!
Saxeex U Gal Xanuun Yar CRM
Barnaamijka maareynta mashruuca wuxuu u oggolaanayaa kooxaha in ay hagaajiyaan isgaarsiinta, maareeyaan socodka shaqada, iyo in ay la socdaan tabka waxqabadyada mashruuca ee hadda socda, dhammaantoodna ay isku meel yihiin.
Waa wax iska caadi ah in suuqleyda ay ka shaqeeyaan jawi iskaashi oo ugu horeyn mashruuc ku saleysan. Macno malahan anshaxa suuq-geynta ee aad ka dhex shaqeysid, aaladda maareynta mashruuca waa mid lagama maarmaan u ah joogitaanka abaabulka iyo la socoshada horumarka mashruuca.
Xalal badan oo qaybtaan ka mid ah ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad u abuurto shaqooyin caadiya howlo maalinle / toddobaadle ah, kaa caawinaya inaad la xisaabtanto waqtiyada soo socda. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii kooxdaadu si buuxda ama qayb fog u shaqeyso.
Tusaalooyinka Barnaamijka Maareynta Mashruuca
Maareynta mashruuca waa suuq camiran, oo leh xalal badan oo qiimo kala duwan leh. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah:
Asana - Asana waa xalka sida joogtada ah loo qiimeeyo maaraynta mashruuca ee ganacsiyada noocyadooda kala duwan. Qalabku wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo maareyn hawleed u oggolaanaya iskaashi iyo habeyn. Asana waxay taageertaa wax soo saarka kooxda iyo waliba shaqsi shaqsiyeed, taasoo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu u habeeyo hawshooda socodka isla markaana gacan ka geysto dadaallada kooxda. Isticmaalayaashu xitaa waxay ku dhisi karaan shaqooyinkooda jadwalka taariikhda, taas oo ka dhigaysa mid fudud in la arko waxa ku habboon iyo goorta.
Isku day Asana si bilaash ah
Doqon - Wrike waa aalad maareynta mashruuca oo lagu dhisay astaamo heer shirkadeed ah oo loogu talagalay ganacsiyada qaabka koritaanka sare. In kasta oo Wrike ay bixiso waxqabadyo badan oo heer-ganacsi ah, haddana xalka ayaa wali si buuxda ugu shaqeynaya bartamaha suuqa iyo ganacsiyada yaryar sidoo kale.
Bilaash bilaash ah Wrike
Sannadkii 2016, shirkaddu waxay ballaarisay khadkeeda wax soo saarka oo ay ku dartay Wrike for Marketers, aalad si gaar ah loogu talagalay in lagu ekeysiiyo qulqulka shaqo suuqgeynta guud.
Wrike for Marketers ayaa si gaar ah loo meeleeyay si ay uga caawiso kooxaha suuqgeynta inay ahaadaan kuwo abaabulan oo fuliya dadaallada guud sida abuurista waxyaabaha, maareynta dhacdooyinka, iyo suuq-geynta suuqa. Qalabku wuxuu xitaa bixiyaa arrimo mashruuc si looga caawiyo inaad bilowdo.
Suuqgeynta softiweerka suuqgeynta waxay ka caawisaa kooxaha suuqgeynta inay otomatigaan socodka shaqada ee laxiriira jiilka hogaaminta, dhajinta baraha bulshada, iyo emaylka waxqabadyada suuqgeynta.
Marka laga reebo faa'iidooyinka waqtiga-badbaadinta ah ee la socda noocan ah aaladda, softiweerka otomatiga ah ee suuqgeynta ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya abuurista farriin shaqsiyeed dhammaan ololeyaasha kala duwan iyada oo aan loo baahnayn dadaal gacan. Ololahan waxaa loo dejin karaa inay shaqeeyaan saacad kasta, xitaa haddii aadan u joogin inaad maamusho.
Tusaalooyinka otomatiga ee suuqgeynta
Waa wax iska caadi ah aaladaha otomaatiga ee suuqgeynta in lagu daro teknoolojiyad kale oo loo maro hal madal oo dhan.
HubSpot - HubSpot waa barxad caan ah oo tag-kobcin oo loogu talagalay in lagu siiyo ganacsiyada iibka, suuq-geynta, iyo qalabka adeegga macaamiisha ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan. HubSpot ee Suuqgeynta Hub waa barnaamijka ugu sarreeya ee bixiya otomatiga suuqgeynta. Qalabku wuxuu leeyahay ballaadhinta awoodaha la xidhiidha jiilka led, suuq geynta emaylka, iyo falanqaynta.
Ka bilow Bilowga Hubspot
Mailchimp – Waxa ku bilaabmay adeegga suuq-geynta iimaylka oo keliya ayaa koray si uu u noqdo Mailchimp-ka caanka ah ee dhammaan-hal-hal-is-weydaarsiga suuq-geynta ee ku wajahan ganacsiyada yaryar.
Saxeex u noqo Mailchimp
Mailchimp ayaa si gaar ah u soo jiidanaya ganacsiyada yar-yar sababtoo ah qorshayaasheeda qiimaha beddelka ah.
Waxa jira nooc bilaash ah oo bixiya dhammaan hawlaha suuq-geyneed ee aasaasiga ah ee ganacsiyada marxaladahooda hore. Mailchimp xitaa waxay siisaa qorshe lacag-bixineed oo loogu talagalay kooxaha kaliya ee qorsheynaya isticmaalka qalabka halkan-iyo-halkaa.
Qalabaynta Qalabka Mashiinka Raadinta
Raadinta mashiinka raadinta (SEO) softiweer ayaa loo farsameeyay si loogu suurtageliyo ganacsiyada inay hagaajiyaan darajooyinkooda raadinta dabiici ah oo ay noqdaan kuwo la ogaan karo.
Qalabka SEO wuxuu bixiyaa astaamo kala duwan oo waxtar leh si looga caawiyo suuqleyda inay sameeyaan cilmi baarista erayga muhiimka ah, dhisida gadaal gadaal, iyo sameynta xisaabinta waxyaabaha ku jira websaydhka jira si loo hagaajiyo guud ahaan kobaca dhijitaalka ah. Qaar badan oo ka mid ah xalalkan ayaa sidoo kale leh awoodo falanqeyn lagu dhisay oo ka caawiya dadka isticmaala inay raadiyaan oo ay cabiraan saameynta dadaalkooda SEO.
Xirmooyinka suuqgeynta ugu waxtarka badan waxay awood u siineysaa kooxdaada suuq-geynta inay si kalsooni leh go'aanno u gaaraan. Sida SEO-ga, waxaa muhiim ii ah inaan helo aalad cilmi baaris oo muhiim ah sida Xeebaha, isku xirka qalabka dhismaha sida Ahrefs, iyo aalad falanqeyn ah sida Google ama Adobe Analytics. Wax kasta oo kale way fiican yihiin in la haysto, laakiin aan loo baahnayn.
Liam Barnes, Khabiir Sare SEO ah at Tilmaamaha
Tusaalooyinka Software-ka SEO
War wanaagsan. Uma baahnid inaad noqotid khabiir si aad u ogaato sida looga faa’iideysto barnaamijka SEO.
Xalal badan oo software-ka SEO ah ayaa macquul ah oo si fudud loo isticmaali karo, xitaa kuwa bilowga ah. Dhanka kale, waxaa jira aalado SEO ah oo horumarsan oo halkaas jooga kuwaas oo u baahan awood software farsamo oo dheeri ah. Dhammaan waxay kuxirantahay hadafka aad raadineyso inaad kudhameysid raadinta dabiiciga ah!
Ahrefs - Ahrefs waxay soo bandhigaan qalab dhamaystiran oo ah qalabka SEO oo leh awoodo kaladuwan oo ay kujiraan cilmi baarista ereyga muhiimka ah, raadraaca darajada, dhismaha iskuxirka, iyo warbixinta. Tani waa wax soo saar hal-hal ah oo loogu talagalay inay ka caawiso suuqleyda iyo xirfadleyda SEO ee dhammaan heerarka khibradaha kor u qaadista qiimeynta taraafikada dabiiciga ah.
Bilow Tijaabada Ahrefs-kaaga
Ahrefs waxay bilaabeen inay ugu horreyntii noqdaan qalab gadaal ah; si kastaba ha noqotee, bixinta ay sii ballaarisay ayaa kalliftay shirkadda iyada oo ah doorka ugu weyn ee booska SEO. Haddii aad u baahan tahay qalab fudud oo SEO ah oo bogga ku yaal oo sameeya (ku dhowaad) wax kasta, Ahrefs ayaa laga yaabaa inuu adiga kuu doorto.
Qaylo-dhaanta 'SEO's Spider' - ScaringFrog waa hay'ad suuqgeyn raadinta oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday oo caan ku ah wax soo saarka SEO Spider. SEO Spider waa guurgure websaydh caan ah oo loo adeegsado sameynta baaritaan qoto dheer oo farsamo SEO ah. Adeegsiga aaladda, suuqleyda waxay ogaadaan xiriiro jabay, dib u habeynta hanti dhowrka, kashifaan waxyaabo nuqul ah, iyo inbadan. Xalka SEO Spider wuxuu u adeegaa hawl aad u gaar ah oo aad ugu habboon SEOs farsamo. Qalabkan waxaa sida ugu fiican loogu isticmaalaa isku-darka aaladda SEO-ga oo dhan, sida Ahrefs. Haddii aad ku cusub tahay dhinaca farsamada ee waxyaabaha, ScreamingFrog waxay bixisaa nooc bilaash ah oo wali leh hawlo hanti dhawr asaasi ah.
Soo dejiso Cawayska Cawayska SEO Spider
Qalabka warbaahinta bulshada ayaa bixiya shaqeynta u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay jadwalaan qoraallada, marin u helaan falanqaynta isticmaaleyaasha sare, iyo la socoshada calaamadaha… si loo magacaabo dhowr.
Tani waxay si gaar ah waxtar ugu yeelan kartaa wakaaladaha ama shirkadaha waaweyn ee hal mar wada sameeya astaamo badan oo warbaahinta bulshada ah. Boostada ayaa loo qorsheyn karaa maalmo ama toddobaadyo ka hor, taas oo ku siinaysa awood inaad waqti badan ku bixiso istiraatiijiyad hal-abuur leh halkii aad ku daabici lahayd qoraal kasta gacanta.
Tusaalooyinka Maareynta Warbaahinta Bulshada
Qaar ka mid ah aaladaha bulsheed waa wada-mid-mid leh hawlo badan oo kala duwan, halka kuwa kalena ay yihiin kuwo si gaar ah u shaqeynaya ama diiradda saaraya hal muuqaal oo gaar ah, sida kormeerka warbaahinta bulshada. Aynu eegno dhowr tusaale:
Iskugeyn bulsho - Sprout Social waa aalad dhan-in-mid sixir maaraynta warbaahinta bulshada. Xalku wuxuu siiyaa dadka isticmaala shay dhan oo astaamo ah oo ay kujiraan otomaatiga boostada, falanqaynta kaqeybgalka granular, iyo warbixinta waxqabadka.
Bilow Tijaabinta Bulsho Bilaash ah
Sprout Social waxaa loo yaqaan isdhexgalka adeegsigiisa-saaxiibtinimo iyo awooda tebinta ee horumarsan. Haddii suuqgeynta warbaahinta bulshada ay tahay dakhliga ugu weyn ee ganacsigaaga, Sprout wuxuu u qalmaa maalgashiga.
Hootsuite - Hootsuite waa madal caan ku ah maareynta warbaahinta bulshada oo loogu talagalay shaqsiyaadka iyo ganacsiyada nooc kasta leh. Qalabku wuxuu bixiyaa astaamo joogto ah sida jadwalka boostada, iyo sidoo kale astaamo aad u horumarsan sida muraayadaha la hagaajin karo, maareynta xayeysiiska bulshada, iyo falanqaynta sirdoonka ganacsiga.
Codso Demo Hootsuite ah
Kala soocida weyn ee Hootsuite? Qiimaheeda la awoodi karo. Waxaa jira xitaa heer bilaash ah oo u oggolaanaya awooda jadwalka xaddidan. Haddii kooxdaadu rabto xal wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo wali si buuxda u shaqeynaya, Hootsuite waa ikhtiyaar adag.
Nidaamka Maareynta Maareynta
Nidaamka maareynta maareynta (CMS) wuxuu bixiyaa shaqeyn si loo maareeyo, loo kaydiyo, loona daabaco waxyaabaha dijitaalka ah. Tan waxaa ka mid ah qoraalka, sawirada la qorsheeyay, fiidiyowga, maqalka, iyo dhammaan hantida kale ee dhijitaalka ah ee lagu daro khibrada websaydhka CMS-gu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad martigeliso dhammaan waxyaabahaan adigoon u baahnayn inaad ka sameysatid koodh cusub xoqida.
Haddii kooxdaadu ujeedadeedu tahay inay si joogto ah u abuuraan waxyaabo cusub, markaa xalka CMS waa baahi. Inta badan aaladaha CMS waxay kaloo bixiyaan howlo SEO ah oo dheeri ah oo fududeynaya in la wanaajiyo waxyaabaha ku jira raadinta dabiiciga ah - taas oo ka caawin karta inay ka dhigto mid la ogaan karo.
Doorashada saxda ah ee 'CMS' ee ganacsigaaga ayaa noqon karta mid khiyaano leh maxaa yeelay qalabku wuxuu u baahan yahay inuu si habsami leh ula dhexgalo kaabayaasha jira ee boggaaga. Nasiib wanaag, xalalka maareynta maadooyinka badankood waxaa loogu talagalay inay sidaa sameeyaan. Hoos, waxaad ka heli doontaa laba ikhtiyaar oo caan ah:
Hubspot CMS Hub - Sidaan hore u soo sheegnay, HubSpot waa horseed bixiye softiweer ah oo loogu talagalay suuqgeynta, iibka, iyo kooxaha adeegga macaamiisha. HubSpot ee bixinta CMS waa ikhtiyaar caan u ah kooxo badan oo suuq-geyn ku xayeysiis ah. Astaamaha xusida mudan waxaa ka mid ah qoraalka qoraalka, tifaftiraha qoraalka hodanka ah, iyo dashboodyada warbixineed ee adag.
Codsi a Hubspot Demo CMS
Maaddaama barta HubSpot mar horeba ay la timid xalal kale oo lagu dhisay sida CRM iyo otomatiga suuq geynta, tani waa ikhtiyaar caqli gal u ah suuqleyda doonaya wax soo saar dhan. Intaa waxaa sii dheer, HubSpot CMS ayaa kuu oggolaanaya inaad isku daraan oo isbarbar dhig Astaamaha. Haddii aad rabto inaad ku martigeliso balooggaaga barxad kale, laakiin weli u isticmaal HubSpot's CMS bogagga degitaanka boggaaga, waad sameyn kartaa.
WordPress - WordPress waa nidaam maareyn mawduuc furan. Barnaamijku wuxuu u shaqeeyaa qaab u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku rakibaan waxyaabo kala duwan iyo sheybaarado kala duwan si ay u habeeyaan shaqeynta iyo muuqaalka websaydhkooda.
Ku billow bogga WordPress
WordPress waa mid ka mid ah qalabka ugu da'da weyn uguna isticmaalka badan ee CMS ee suuqa ku jira. Intaas marka la dhaho, sidoo kale waa qalab iskiis loo martigeliyey, taas oo macnaheedu yahay inaad wali u baahan tahay inaad hesho adeeg bixiye websaydh ah oo aad u sameysato lambar khaas ah si ay u shaqeyso
Wixii suuq-yaqaan ku xeel dheer aqoonta ee doonaya fursadaha habeynta aan dhamaadka lahayn, WordPress wuxuu kuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu fiican.
Adigaa iska leh
Waxaa muhiim ah in la ogaado in liiskani aanu xitaa u dhawayn dhammaystirnaan.
Haddii aad tahay jaakad dhammaan xirfadaha, waad isticmaali kartaa dhammaan qalabkan softiweerka ka dibna qaar; waxaa laga yaabaa inaad haysato qalab kala duwan oo si fiican uga shaqeynaya yoolalkaaga. Haddii doorkaagu diiradda saarayo waxqabad gaar ah, sida xayeysiinta dhijitaalka ah, waxaa macquul ah in xayeysiintaada suuqgeyntu ay u muuqato mid xoogaa jilicsan.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan xirmada tiknoolajiyada ayaa ah inaad awood u leedahay inaad ka dhigato mid adiga kuu gaar ah. Tilmaamahan adoo maanka ku haya, waxaad si cidhiidhi ah u qeexi kartaa aaladaha ugu muhiimsan ee kooxdaada suuqgeynta ka dhigi doona mid si gaar ah u guuleysta.
Barnaamijka suuqgeynta ayaa kaliya awood u leh sida qofka adeegsanaya. Baro sida kooxda Tilmaamuhu uga caawin karaan ganacsigaaga sii dheeree tiknoolajiyadaada si aad u bixiso natiijooyinka suuqgeynta raadinta halista ah.
Shaacinta: Waxaa jira xiriiriyeyaal xiriir la leh oo loo adeegsaday maqaalkan.
Tags: ahrefsAsanaCRMmaamulka xiriirka macaamiishasida loo dhiso meeris meekh ahHubspot cmsdhib yar crmmailchimpMarc Andreessensuuq-geynta suuqasuuq geynta tiknoolajiyadaisdabajoogga tikniyoolajiyaddaxidhmooyinMaamulka mashruucasaasiibinayna search enginemaareynta warbaahinta bulshadaWordPress